Maalinta Mahadnaqa Farxada leh
Thanksgiving -ku waa wakhti aad ugu mahadcelisid oo aad u qaddariso qofka aad haysato iyo waxa aad kasbato. Waa wakhti ay qoysasku kulmaan, dib u midoobaan, is -dhexgalaan oo ay ku raaxaystaan ​​wax -wada -lahaanshaha, oo ay wadaagaan farxadda iyo tiiraanyada midba midka kale, mararka qaarna fursadda keliya ee sannad gudaheed. Maalinta Thanksgiving ka hor, dadku waxay ...
SJJ waxay Bixisaa Billado Billad Gaar ah leh oo Ballaadhan
Miyaad ka daashay biladaha caadiga ah iyo alaabada biraha? Ma rabtaa in abaalmarintaadu noqoto mid gaar ah oo soo jiidata indhaha macaamilka? Miyaad weli raadineysaa soo -saare lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay naqshadaha billadaha gaarka ah? Maxaad ugu dooran weyday hadiyado qurxoon oo dhalaalaya bilaha abaalmarinta gaarka ah? Fadlan hoos ka hubi sawirka ...
Token Trolley Jumlada & Furaha Qadaadiicda Qadaadiicda ah
Lacagta qadiimiga ah oo sidoo kale loogu magac daray qadaadiicda taraafigga, ayaa loo adeegsadaa beddelidda qadaadiicda dhabta ah ee dukaanka weyn, sanduuqa jimicsiga ama meelaha kale, gaar ahaan waddamada Yurub iyo suuqa Mareykanka. Cabbirro & dhumucyo kala duwan ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo qadaadiicda waddanka oo ay ka mid yihiin Euro, Jarmal, Faransiis, Du ...
Muraayadaha Qurxinta Jeebka
Ma waxaad u raadineysaa wax dalacsiin ah ama hadiyado qurux badan gabdhaha ama marwooyinka? Mid ka mid ah hadiyadahayaga xiisaha leh - muraayadaha akril -ka & muraayadaha qurxinta birta ayaa kuu noqon lahaa ikhtiyaar wanaagsan. Muraayadda jeebka ee qurxoon oo qurxoon waxaa lagu samayn karaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta, zinc al ...
Armbands Sport & Boorsada Dhexda
Ma jeceshahay ciyaaraha dibadda? Miyaad ka walwalsan tahay inaadan haysan meel aad ku kaydiso taleefankaaga gacanta ama waxyaabaha qaaliga ah inta aad jimicsiga samaynayso? Armbands -ka isboortiga moodada iyo bacda dhexda ayaa hubaal ahaan xallin doonta xujooyinkaaga, waligoodna ma yeelan doonaan waayo -aragnimo aan ku ogeyn halka lagu rido taleefankaaga gacanta ama shaqsi kale ...
Hal -abuur La Samee Alaabta Dhiirrigelinta Qoryaha
Miyaad raadineysaa hab deegaan-saaxiibtinimo leh si kor loogu qaado dallacsiintaada? Miyaad u baahan tahay badeecad xayaysiis ah oo laga sameeyay alaabta dabiiciga ah si loogu isticmaalo bixinta ama kor u qaadida astaantaada? Oo haddii aad qabto walaacyo ku saabsan baabi'inta qashinka caagga ah ee deegaanka adduunka, alaabada xayeysiinta alwaaxda wou ...
Koofiyadaha Waxqabadka kala duwan
Hadiyadaha Quruxda Badan leh ma aha oo kaliya inay bixiyaan pin lapel, medallion, sharooto daabac, lanyard, laakiin sidoo kale waxay awoodaan inay soo saaraan dhammaan noocyada koofiyadaha sida milatariga Beret, daboolka adeegga, daboolka dib -u -dhaca, fiidiyaha qorraxda isboortiga, koofiyadaha xumbada muquuninta, daboolka xayeysiinta, koofiyadda dhogorta , koofiyadaha dabaasha silikoon, koofiyadaha xumbo EVA, ha ...
Calaamadaha Magaca Waarta, Taarikada Magaca, Calaamadaha Magaca
Calaamadaha magaca sidoo kale loogu magac daray taarikada magaca, summadaha magaca. Kaliya maahan shey waxtar leh oo ku habboon aqoonsiga shaqaalaha, laakiin sidoo kale waa qayb muhiim u ah ganacsi kasta oo macmiilku wajahayo si ay u muujiyaan muuqaalkooda & dhaqankooda. Si kasta oo aad u tahay sumado waaweyn oo caalami ah ama ganacsiyada qoyska yar, ...
Qalabaynta qalabka wax lagu qoro waa magac tiro badan oo tixraacaya agab ganacsi oo la soo saaray, oo ay ku jiraan warqad la jaray, baqshado, qalab qoris, warqad foom joogto ah, iyo agabyo kale oo xafiis. Waxay noqon doontaa xilli dugsiyeedka cusub ee soo socda Sebtember. Miyaad diyaarisay xoogaa stati ah ...
Astaamaha Zinc Alloy & Badges
Miyaad jeceshahay inaad ka dhigto qaar ka mid ah soo jiidashada biraha tayo sare leh qalabkaaga? Fadlan kaalay oo nagu soo biir, Hadiyadaha qurxoon ee dhalaalaya ayaa fulin doona rabitaankeenna waxayna fikraddaada gelin doonaan nolosha dhabta ah. Waxaan kuu soo bandhignay naqshado waaweyn oo furan oo loogu talagalay silsiladaha dhaadheer, jijimooyinka jijimooyinka, soo jiidashada xayawaanka, qurxinta kirismaska ​​si aad ...
Ururinta Wax -soo -saarka TPU ee nooleyn kara
Waxaa laga yaabaa inaad ogaato inuu xagaaga sii kululaanayo & qabowga, qabowga & qabowga xilliga jiilaalka. Ilaalinta deegaanku waxay noqonaysaa lama huraan. Iyaga oo ay weheliyaan dadka codsanaya ilaalinta deegaanka oo ka sarreeya & ka sarreeya, si waafaqsan, waxyaabaha laga yaabo inay nooleyaal noqdaan waa isbeddel. Marka laga reebo ...